Homeसमाचारधुर्मुस सुन्तलीले नीर्माण गरेको बस्तीमा पुग्दा रोइन आमा, “कि खान देउ कि घर लैजाउ” (हे’र्नुहोस् भिडियो)
February 18, 2021 admin समाचार 6839
अभिनेत्री स्वेता खड्काले नि’र्माण गरिएको भनिएको माझी वस्तीको स्थलगत रिपो’र्टिङपछि यसै साता हाम्रो कला टिभीको टिम धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरेको महोत्तरीको बर्दिवासस्थित ए’कीकृत नमूना मुसहर वस्ती पुग्यौँ । वस्ती हस्तान्तरण भएको तीन व’र्षपछि त्यहाँको वस्तुस्थिती बुझ्न जब मंगलबार बिहानै हामी त्यहाँ पुग्यो, वस्तीको मुहार खुशी’ले रंगिएको थियो । कारण, त्यहाँ वस्तीकै सदस्य कसैको बिहे भइरहेकोे थियो । बाजा बजिरहेको थियो, वस्तीका मुस’हरहरु खुशीले नाचिरहेका थिए ।
सधँै अभाव, गरीबी र उत्पीडनले डामिएका मुस’हरहरुको दैनिकीमा यस्तो खुशीको मौसम विरलै देख्न पाइन्छ । नत्र त आज के काम पाइएला, कति कमा’इएला, साँझ खान पाइएला÷नपाइएला, यस्तै प्रश्न र चिन्तामै त बित्छ उनी’हरुको जीवन ।
तीन वर्षअ’घिसम्म खरको झुपडीमा बस्दै आइरहेका त्यहाँका मुसहरहरु पक्की घरमा बस्न पा’उँदा खुशी त हुने नै भए । तर, लगभग १६ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो एकीकृत बस्तीमा पुग्दा धेरैको गुनासो थियो– ‘घर त पाइयो, तर काम खोइ ?’ काम नपा’उँदा जिविको टार्न धौ धौ परिरहेको पीडा उनी’हरुले सुनाए ।
वस्तीभित्र रिपो’र्टिङका क्रममा हामी पुग्यौँ, घरअगाडी आँगन पोतिरहेकी आमा फुलकमारी सदाको घरमा । आफ्नै छोराबुहा’रीबाट हेपिएको बताउँदै गर्दा उनका आँखाबाट आँशु थामिएनन् । लडेर घाइते भएका श्रीमान्लाई उनी अरुसँग भिख मागेर पा’लिरहेको बताइरहेकी थिइन् । १ वर्षदेखि वस्तीमा धुर्मुस सुन्तली नआएको गुनासो गर्दै उनी टिलपिल आँशुसहित विलौना गरि’रहेकी थिइन्, ‘धुर्मुस सुन्तली चाँडै चामल लिएर आउनु ल ।’ – ओएस नेपालबाट
March 26, 2021 admin समाचार 5651
नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरा’वट आएको छ । यस्तै, चाँ’दीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार छापावाल सुन तोलाको ८६ हजार ९०० रुपैयाँमा का’रोबार भएको थियो । आज
May 13, 2021 admin समाचार 5619
कोरोना भाइ’रससँग मिल्ने ‘कन्टेजन’ को कथा,जुन १० वर्षअघि ब’नेको थियो
August 19, 2020 admin समाचार 41155
कोरोना भाइरस महामा’रीले विश्वका लगभग सबै मा’निसको जीवनमा प्रभाव पारेको छ । भाइरसका कारण मान्छेले सामाजि’क दूरी कायम राख्न थालेका छन् भने हात मिलाउनुको साटो टाढैबाट नमस्कार गर्न थालेका छन् । विश्वमा कोरोना भाइर’सबाट करोडभन्दा
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (241959)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229860)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229489)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227863)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226659)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226237)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194259)